दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कलाकार: कसले कहाँबाट भोट हाल्दैछन् ?
काठमाडौं, १८ मंसिर – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको चुनाव सकिएलगत्तै अहिले दोस्रो चरणमा हुन लागेको चुनावी चर्चाले बजार तातेको छ । साथै नेपाली कलाकारलाई पनि यतिबेला चुनावी माहोलले उत्तिकै छोएको छ । मंसिर २१ गते हुन लागेको दोस्रो चरणको चुनावमा कलाकार पनि उम्मेदवारका लागि भोट माग्दै लागेका छन् भने कोही कलाकार आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन लागिपरेका छन् । केही कलाकार भने दलीय अभियानमै सहभागी भएर चुनावी कार्यक्रममा समेत सहभागी भएका छन् ।
अन्य जिल्लाबाट काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएका कलाकार चुनावमा भोट हाल्न पुगिसकेका छन् भने नायिका रेखा थापा, ब्रदी पंगेनी, कोमल वली, करिश्मा मानन्धर लगायतका कलाकार खुलेरै चुनावमा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवार जिताउन लागिपरेका छन् ।
निर्देशक तथा अभिनेता निश्चल बस्नेतको जन्मघर झापा भए पनि उनको मतदाता नामावली भने काठमाडौंबाट छ । त्यस्तै ‘मै पनि एमाले’ गीत गाएका बद्री पंगेनी भोट हाल्नका लागि जन्मथलो पाल्पा पुगिसकेका छन् । चुनावी सरगर्मी तातिरहेका बेला उनले वाम गठबन्धनका लागि भोट पनि मागिरहेका उनलाई चुनावले भने व्यस्त नै बनाएको छ । ‘पाल्पाको क्षेत्र नं. १ मा मत हाल्दैछु, चुनावपछि पनि केही दिन यतै गाउँतिरै हुन्छु होला’, पंगेनी सुनाउँछन् ।
लोकगायिका कोमल वली रेडियो नेपालको जागिर छोडेर राजनीतिमा लागेसँगै उनको दिनचार्य पनि फेरिएको छ । एमालेबाट टिकट नपाएर बागी उम्मेदवारीसमेत दिएकी वलीले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए वाम गठबन्धनका लागि भोट मागिरहेकी छिन् । अहिले उनी दाङको क्षेत्र नं. ३ बाट भोट दिँदैछिन् ।
त्यस्तै ‘कान्छी’ चलचित्रमार्फत दर्शकमाझ आउँदै गरेकी अभिनेत्री स्वेता खड्का काठमाडौंको क्षेत्र नं. ६, बालाजुबाट भोट हाल्दैछिन् । यतिबेला उनी चुनावी माहोलमा भन्दा आफ्नो चलचित्रको प्रचारमा व्यस्त छिन् ।
अभिनेता आर्यन सिग्देल काठमाडौं १० क्षेत्रको चन्द्रागिरीबाट भोट हाल्दैछन् भने हास्यकलाकार किरण केसीले ललितपुरको क्षेत्र नं. १ स्थित महादेवस्थानबाट भोट हाल्दैछन् ।
हास्य कलाकार डिट्ठासाप किशोरले काठमाडौं, क्षेत्र नं. ६, काभ्रेस्थलीबाट भोट हाल्दैछन् । भोट हाल्ने भएपनि चुनावी सरगर्मीले भने खासै छोएको छैन धेरै कलाकारलाई ।
अभिनेता गौरव पहारी पहिलोपटक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भोट हाल्न जान नपाएको बताउँछन् । यतिबेला फिल्मको छायांकनमा व्यस्त पहारी आफूलाई चुनावबारे खासै चासो नभएको बताउँछन् । ‘फुर्सद नहुँदा मैले केही गर्नै पाएको छैन, मेरो त मतदाता नामावलीमा नाम पनि छैन’, उनी थप्छन्, ‘काम विशेषले भैरहवा आएको छु, भोलिबाटै शूटिङमा व्यस्त हुन्छु ।’